रेकर्डिंगमा ‘कस्मिक लभ’को गीत « रंग खबर
रेकर्डिंगमा ‘कस्मिक लभ’को गीत
रंगखबर, काठमाडौँ- औपचारिक घोषणा हुन लागेको चलचित्र ‘कस्मिक लब’को ‘माया तिमीलाई’ बोलको गीत अहिले धमाधम रेकर्डिंग भइरहेको छ। गीतमा बाबुल गिरि तथा मिलन अमात्यको स्वर रहेको छ, भने संगीत पनि बाबुल गिरिकै रहेको छ। गीतमा दिनेश सुबेदीको शब्द रहेको छ।
चलचित्रमा अभिनेता द्वय प्रशान्त ताम्राकार, अर्पण थापा र अभिनेत्री दिया मास्के पहिलो पटक एकसाथ देखिने भएका छन् । जय गौतमले निर्माण गर्ने ‘कस्मिक लभ’मा यी तिन कलाकारहरु अहिले सम्म फाइनल भै सकेका छन । मुभी मेकर्सको ब्यानरमा निर्माण तथा सुरज प्रधानको प्रस्तुति रहने चलचित्रका अन्य कलाकारहरु भने फाईनल हुन बाँकी रहेको जानकारी बाहिरीएको छ । शंखर अधिकारीले निर्देशन गर्ने चलचित्रमा डी . एन. दाहाल कार्यकारी निर्माताको रुपमा रहनेछन ।
यहि असारको ११ गतेबाट छायांकन सुरु हुन लागेको चलचित्रलाई सुरेश बज्राचार्यले छायांकन गर्दैछन् भने कोरियोग्राफीमा कविराज गहतराज र रामजी लामिछाने रहनेछन। शेखर ज्ञावालीको कथा रहेको चलचित्रमा बाबु साहेबको द्वन्द्व रहने छ।